5 Waxyaabood Oo Nin Kasta U Baahanyahay Inuu Sameeyo Haddii Uu Doonayo Inuu Ilaaliyo Farxadda Xaaskiisa | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Waxyaabood Oo Nin Kasta U Baahanyahay Inuu Sameeyo Haddii Uu Doonayo Inuu Ilaaliyo Farxadda Xaaskiisa
5 Waxyaabood Oo Nin Kasta U Baahanyahay Inuu Sameeyo Haddii Uu Doonayo Inuu Ilaaliyo Farxadda Xaaskiisa
Aayaha editor Send an email November 23, 2018
Haddii aad rabto inaad ilaaliso farxadda xaaskaaga, shantaan waxyaabood ayaa lagaa rabaa inaad sameyso.
K adhigo saaxiibka kuugu wanaagsan
Haddii aad rabtid inaad haweeneydaada ka dhigto mid faraxsan, waa inay noqotaa saaxiibka kuugu wanaagsan. Markaad noqoto saaxiibkeeda ugu wanaagsan, waxaad ku faraxsanaaneysaa inaad mar walba dhageysatid. Markaa tahay saaxiibkeeda ugu wanaagsan, waxay kuu arkeysaa nin ay la qosli karto lana ooyn karto. Inaad saaxiib la noqoto xaaskaaga waa calaamadda xiriirka wanaagsna.
Goorma ayuu ahaa waqtigii ugu dambeeyay ee aad xaaskaaga ku dhahdo “waa mahadsantahay” kadib markii ay casho kuu karisay? Xaqiiqda ayaa waxa tahay in xaaskaaga aad ka dhigi karto mid faraxsan balse haddii aadan qadarin kama dhigi kartid. Markaad qadarisid waxaad dareensiisay inay muhiim tahay waana mid ay ku faraxeyso. Markaad u qirtid dadaalkeeda kuna qadarisid waxyaabaha ay sameyso, waxaad ku dhiiri galisay howshaas sidii hore si wanaagsan ay usii wado.
Dareensii in la jecelyahay oo la rabo
Haddii aad rabto in gabadhaada ay faraxsanaato, waa inaad dareensiisaa inay tahay qof kugu weyn. Waxaad ku dareensii kartaa inay qaali kugu tahay inaad dareensiisid kalgacayl iyo rabitaan. Haweeneydaada waxay rabtaa inay ogaato inaa jeceshahay nin kastana oo doonaya in xaaskiisa ay faraxsanaato waa inuu tusaa jacaylka uu uqabo.
Sii kalsooni iyo nabad
Haweeneydaada ma faraxsanaaneyso haddii aysan ammaan iyo kalsooni ku dareemin la joogaaga. Markaad haweeneyda ka dhigto mid og inaadan waligaa dhaawici doonin waxaad siisay kalsooni iyo isku haleyn waana arrin ka farxineysa.
Haweeney kasta waxay u baahantahay inay dareento kalsooni isla markaana ay ogaato inay leedahay nin ku kalsoontahay oo nabad siinaya iyo farxad.
Ka dhig mid kugu kalsoon
Waa inaad diyaar u noqotaa inaad sameyso wax kasta oo ay kugu aamini karto haddii aad daneyneyso farxadeeda. Ka dhig mid kugu kalsoon, ma oran kartid waxaan rabaa farxadeeda adigoo aanan ka dhigin mid kugu kalsoon. Nin kasta waa ogyahay in illaa ay haweeneydiisa ka aaminto in jacaylka uusan gaareyn halkii loogu talagalay isla markaana uu qabyo yahay.
Nin kasta xaaskiisa kama dhigi karo mid faraxsan, kaliya ragga wanaagsan ayaa uun sameyn kara.